FIANARANTSOA : Depiote Hvm mahavita maniratsira ireo mpanao gazety mpanohitra
Tafahoatra. Io no azo ilazana ny fomba fitenin’ny solombavambahoaka voafidy tao Fianarantsoa tamin’ny alalan’ny antoko Hvm. 12 février 2018
Vitan’ity farany ny naniratsira sy nanao fomba fiteny tsy mendrika an’ireo mpanao gazety tsy mitovy firehana aminy raha nikabary imasom-bahoaka ny tenany, ny zoma lasa teo iny. Fihetsika izay tsy nametraka ny tenany ho olom-boafidy sy raiamandrenin’ny tanàna mihitsy.
Araka ny loharanom-baovao voaray avy amin’ny fahitalavitra tsy miankina iray avy any an-toerana dia noho ny famoahan’ireo mpanao gazety ny vaovao manoloana ny tsy fahaizany mitantana ny tanàna ary tsy fahitana azy firy tao an-toerana taorian’ny nahalany azy no antony nanaovany ireo teny tsy mendrika ireo. Voahoso-potaka ary nolazainy mihitsy fa “homosexuel” ireo mpanao gazety mpanohitra tamin’izany. “Ho an’ity solombavambahoaka ity, rehefa haino aman-jery sy mpanao gazety mamoaka ny vaovao marina mikasika ny tsy fandraisany andraikitra sy ny fitarainan’ny vahoaka amin’ny tsy fahitana azy taorian’ny fahalaniany dia soketainy sy haratsiany amin’ny lafiny rehetra.
Tamin’ity indray mitoraka ity dia tsy menatra ny tenany nanala baraka ny mpiasan’ny haino aman-jery izay sokajiany ho mpanohitra na homosexuel na Pd izany mpiasan’ny onjam-peo sy fahitalavitra izany”, hoy ilay loharanom-baovao voaray. Rehefa nanontaniana ny mahakasika an’ilay teny nolazainy anefa ity olom-boafidy ity dia nambarany fa tsy tokony handratra an’iza na iza iny teniny iny ary tsy miantefa amin’iza na iza ihany koa.
Manao ny ataony avokoa amin’izao fotoana izao ny ankamaroan’ireo olom-boafidy avy amin’ity antoko Hvm ity. Raha tsiahivina dia voalaza fa maka vola tsy ara-drariny sy manao fanaparam-pahefana ihany koa ny ben’ny tanànan’i Hvm voafidy ao anatin’ny Kaominina Malaimbady izay niteraka hetsi-bahoaka goavana tany an-toerana, ka mitaky ny hialany eo amin’ny toerany ny vahoaka any an-toerana. Eo anatrehan’izany rehetra izany anefa dia mahay miala sy miaro ny tenany hatrany izy ireo rehefa anontanian’ny mpanao gazety.
2018-02-17 21:53:21 par bordeaux 3300
Mampiharihary NY mpikambana rehetra ao am hvm ihany.mpanao politika makorely hoy NY fitenin i baba gangs daholo ni ao.rehefa makorely NY mpanao politikanareo ao dia tohizo ry député NY tohiny an.